Izindaba - Iba nethimba elinamandla ngemuva kokuthengisa, ukulungisa imishini yesikhathi eside nokulungisa izinto ezweni lonke
Iba neqembu eliqinile ngemuva kokuthengisa, ukulungisa imishini yesikhathi eside nokulungisa ezweni lonke
[Incazelo efingqiwe] I-Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd.iseningizimu yenhlokodolobha iBeijing nasenyakatho neJinan. Inokuthuthwa kwamanzi namhlaba okulula kakhulu. Kuyibhizinisi lochwepheshe elinesilinganiso esikhulu sokukhiqizwa kwemishini yamakhathoni nemishini yokuphrinta. Le nkampani inemishini ephelele yemishini, ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, ulwazi olunothile lokukhiqiza, amandla aqinile wezobuchwepheshe, izindlela zokuhlola ezithuthukile, uhlelo oluphelele lokuphatha, futhi isidlulile i-ISO9001: 2000 isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwamazinga omhlaba jikelele (inombolo yokubhalisa: 03605Q10355ROS), Ingabe inkanyezi ekhulayo womkhakha wemishini yokuphrinta ibhokisi lami wezwe lami. Imikhiqizo yenkampani yethu inamamodeli amaningi womshini, imininingwane ephelele, futhi ingahlangana
I-Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd.iseningizimu yenhlokodolobha iBeijing nasenyakatho neJinan, enezinto zokuhamba zamanzi nezomhlaba ezilula kakhulu. Kuyibhizinisi lochwepheshe elinesilinganiso esikhulu sokukhiqizwa kwemishini yamakhathoni nemishini yokuphrinta. Le nkampani inemishini ephelele yemishini, ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, ulwazi olunothile lokukhiqiza, amandla aqinile wezobuchwepheshe, izindlela zokuhlola ezithuthukile, uhlelo oluphelele lokuphatha, futhi isidlulile i-ISO9001: 2000 isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwamazinga omhlaba jikelele (inombolo yokubhalisa: 03605Q10355ROS), Ingabe inkanyezi ekhulayo womkhakha wemishini yokuphrinta ibhokisi lami wezwe lami.
Imikhiqizo yethu inamamodeli amaningi womshini nokucaciswa okuphelele, okungahlangabezana nezidingo zabasebenzisi abahlukile. Ngomoya "Qhubeka Uthuthuka" futhi "Uhola Okuphezulu", inkampani yethu ikhuthaza ngenkuthalo ukuphathwa kwekhwalithi ephelele. Imikhiqizo ekhiqiziwe, ngenxa yokubukeka kwayo okuhle, ubuciko obuhle futhi obucokeme, intengo efanelekile kanye nensizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva, itholwe kahle ngabasebenzisi abavela kuwo wonke umhlaba iminyaka eminingi.
Le nkampani ineminyaka engaphezu kwengu-30 ye-R & D nesipiliyoni sokukhiqiza. Le nkampani ibilokhu ibambelela kumqondo wensizakalo we "ikhwalithi njengesiqinisekiso, insizakalo njengenhloso, kanye namakhasimende", futhi isebenza kubuchwepheshe obuphambili, ulwazi lobuchwepheshe kanye nokuphathwa kwekhompyutha. I-R & D kanye nokukhiqizwa kwemishini yokukhiqiza ibhodi ephelele. Ngokususelwa esikhathini samanje, sibheke esikhathini esizayo, sibhekene nesidingo esiphuthumayo sokuguqula imishini yamakhathoni ethuthukile njengamanje, sizobambisana ngentshiseko egcwele ngokugcwele, siqinise ukuphathwa kwangaphakathi, sandise imakethe ngaphandle, sandise ucwaningo lwesayensi, ucwaningo futhi sithuthukise izinhlobo ezintsha zomkhiqizo , futhi uthuthukise imikhiqizo ekhona Inkomba ngayinye yokusebenza yenkampani izama ukukunikeza ukuthula kwengqondo okungu-100% nokwaneliseka okungu-1 000 ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi ebiza izindleko kanye nesevisi ephelele yokuthengisa ngemuva, futhi uyasibona isimo sethu sokuwina!